Realme 8: Waa jaangoyn cusub oo qiimo u leh lacagta | Androidsis
Shirkadda Aasiya ee Realme waxay sii wadaa inay ku sharraxdo bixinta alaabooyinka qiimaha wanaagsan u leh lacagta, iyagoo si khatar ah ugu dhowaanaya qaaciddada Xiaomi ee guusha, xitaa mararka qaarkood waxay dhaaftay soo jeedinteeda ku saleysan baaxadda iyo badeecada qaaska ah, hase yeeshee, Realme waxay sii wadaa inay diiradda saarto taleefanka gacanta sida soo jiidashada ugu weyn.
Waxaan gacanta ku haynaa Realme 8 cusub waxaanan si qoto dheer u falanqeyneynaa si aan kuugu sheegno waxa khibradayada isticmaale oo dhameystiran ay ahayd. Nagala soo bax qalabkan cusub ee dhexdhexaadka ah ee u imanaya inuu ku tartamo suuq sii kordhaya oo ciriiri ah oo leh xulashooyin xiiso yar.
3 Is-maamul iyo Realme UI 2.0
4 Khibradda Multimedia iyo tijaabada kamaradda
Realme had iyo jeer way ogtahay, ugu yaraan illaa iyo hadda, inay ku sharraxdo naqshadaha "ma ahan waxa ay u muuqdaan", si loo yiraahdo. In kasta oo xaqiiqda ah in boorarkooda wax soo saarku ay ku saleysan yihiin caag, runtu waxay tahay inaad ku qasban tahay inaad gacanta ku hayso si aad u xaqiijiso. Wax la mid ah ayaa markale ku soo noq noqday Realme 8, terminal kugu martiqaadaya inaad ka fikirto dhisme cayiman laakiin ugu dambeyntii u ololeeya caag. Tani waa sida ay ku heleen xasilloonida saxda ah ee udhaxeysa miisaanka iyo cabirka dhexdhexaadka ah.
Cabirrada: X x 160,6 73,9 7,99 mm
Miisaanka: Gram 177
Dhinaceeda, terminalku wuxuu leeyahay deked Xarunta-xudunta u ah USB-C, oo ah tan ku xigta waxaan ka heli doonnaa deked baabi'isay 3,5mm jaakad taas oo inta badan la qadariyo inkastoo xaqiiqda ah in sameecadaha dhagaha leh ay ku dhow yihiin shay cibaado leh qalabkuna aanu lahayn aptX. Qaybta kore ee gebi ahaanba hufan iyo dhinaca midig waa meesha ay ku yaalliin badhanka mugga iyo awoodda. Terminalku wuxuu sifiican gacmaha ugula jiraa inkasta oo nuqulkiisa madow (waxaan leenahay dhalaalaya caddaan iyo dhalaal madow) waxay dhibaato weyn ku leedahay haynta faraha. Si kastaba ha noqotee, daboolka ayaa ku jira xirmada.
Sida wadnaha aaladda, markan Realme waxay go'aansatay inay sharad ku gasho MediaTek, G95-ka caanka ah dhex-dhexaad ah oo ay la socdaan saddex nooc oo xusuus ah RAM ah 4, 6 iyo ilaa 8GB, Awooddaan ugu badan ayaa si sax ah u ah waxa aan falanqeynay muddo laba toddobaad ah. Dhiniciisa Kaydinta kaliya ee Realme 8 waa 128GB, wax aan helnay in ka badan intii ku filnayd, in kasta oo ay run tahay in aanu lahayn nooc faylal ah ama qalab gaar ah oo hagaajiya waxqabadka heerka akhriska iyo qorista.
Waxaan ka heli faahfaahin yar oo dheeraad ah oo cajiib ah, sharad on WiFi 6 iyo 4G LTE heerka isku xirnaanta wireless, taas oo na siisay waxqabad wanaagsan shabakadaha 5GHz sida aad ku aragtay fiidiyowga. Bluetooth 5.0 inta hartay ee shaqeynaya. Waxaas oo dhami waxay ku socon doonaan hoosta Realme UI 2.0, lakabka ka soo baxa korka Android 11 oo aan gadaal ka hadli doonno. Warqad ahaan, sidaan soo aragnay, Realme wax badan kama dhinna, inkasta oo ay si cad u tixgelineyso guddigooda AMOLED, shirkaddu waxay go'aansatay inay sharad ku sameyso nidaam Akhristaha shaashadda shaashadda ee shaashadda oo si fiican u shaqeeya iyadoo la tixgelinayo qiimaha.
Is-maamul iyo Realme UI 2.0
Waxaan ku bilaabaynaa midka ugu weyn, batarigiisa, waxaan haynaa 5.000 Mah oo leh "dhakhso" lacag ah wax ka yar saacad. Xirmada waxaa ku jira xeedho 30W iyo fiilo USB-C ah, laakiin ma yeelan doonno headphones inkasta oo aan haysanno Jackmm 3,5mm. Way ka maqan tahay, sababo muuqda awgood, xukun lacag la aan ah, in kasta oo ay tahay wax ay isticmaaleyaal badani weli seegin in badan oo ka mid ah terminaalyadan, iyo sidoo kale NFC chip. Bateriga wuxuu na siinayaa in ka badan maalin isticmaalka caadiga ah, in kasta oo ay xoogaa ku diiri karto ciyaaraha fiidiyowga.
Realme UI 2.0 waxay dhadhamisay dhadhan qadhaadh afkayga, Waqtigaas, Realme waxay timid Isbeyn iyada oo la nadiifinayo nidaamkeeda hawlgalka calan waana sida ay ahayd. Intii lagu jiray heerka naqshadeynta Realme UI 2.0 waxay dareemeysaa kacdoon iyo qurux leh codadkeedii hore iyo naqshadaha fidsan, waayo-aragnimada waxaa si buuxda loogu wasakheeyay taxane ah "bloatware" oo ah qaab gaabin qarsoon oo qaab codsiyo ah, kuwo kale oo badan oo aanan sameyn ogow. maxaa loogu dhejiyaa sida Facebook ama Tiktok.
Khibradda Multimedia iyo tijaabada kamaradda
Waxaan jecelnahay inaan qaybtaan ku falanqeyno dadaal. Waxaan ku bilaabaynaa guddi 6,4-inji ah oo leh Super AMOLED technology loo maleynayo inay samaysay shirkadda Samsung. Dhexdeeda waxaan ka heli doonnaa iftiin ugu badnaan 1000 qandhicilka, ku filan dagaalka banaanka. Shaashaddu waa mid caan ah oo leh naqshad fidsan, hase yeeshe, waxaan leenahay culeyska bidix ee kore iyo shax hoose oo aanan fahmin haddii aan tixgelinno kaameradda ku duugan aagga sare. Sida codka, Waxaan ku leenahay hal kuhadal hoose oo si fiican loo dhejiyay oo bixiya dhawaq xoog leh oo cad, oo ku xejinaya kala duwanaanshaha dhamaadka-sare sababo iska cad.
Kaamiradu waa halka aan si cad uga bilowno helitaanka dhibaatooyinka ugu horreeya, waxaan leenahay afar dareemayaal, mid ka mid ah 64-ka weyn ee MP oo xitaa dijitaal ahaan na siiya xasilinta fiidiyoowga wanaagsan. Waxay ku xanuunsaneysaa farqiga iyo xadgudubka HDR markaan si toos ah u dhigno. Waxaan ku sii wadaynaa kamarad 8 MP ah oo loogu talagalay Ultra Wide Angle, iyo laba dareemayaal, mid ka mid ah 2MP macro iyo midka kale ee 2MP oo loo qaabeeyey madow iyo caddaan si loo hagaajiyo, aragti ahaan, sawirrada qaabka sawirka. Fiidiyowgeenna waxaad ku arki kartaa waxqabadka kamaradaha si toos ah, inta ka horreysa waxaan kaaga tagi doonnaa shaybaarada sawir ee hoose.
Taasi waxay tiri, aan la tagno awoodaha tan Realme 8, tan koowaad waa iska cadahay qiimaheeda, 199 euro waa mida rasmiga ah, inkasta oo lagu sii wanaajin karo dalabyo gaar ah oo la bilaabayo. Waxa ku xiga waa muuqaal caan ah oo 6,4-inji ah oo Super AMOLED ah, si fiican u rakiban isla markaana leh dhalaal wanaagsan. Is-maamul hoosta calanka ayaa sidoo kale ka dhigi doonta isticmaalka aaladda mid lagu farxo inkastoo xaqiiqda ah in kharashkeeda degdegga ah uusan u ekaan karin xawaare xad dhaaf ah.
Dhinaceeda, sida ay isugu dhafan yihiin Realme UI 2.0 waxay naga reebtay dhadhan qadhaadh, iyo sidoo kale dareenka caagga ah ee xad-dhaafka ah ee terminal-ka. Sida iska cad waxaan ka maqanahay lacag bixinta wireless-ka ama NFC, wax la fahmi karo qiimaheeda.
Shaashad wanaagsan Super AMOLED
Qiimo aad macquul u ah
Badanaa wuu kululaadaa
Ma jiro NFC
Kaamiro aad u cadaalad ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Realme 8: Waa jaangoyn cusub oo qiimo u leh lacag